यूएईमा अवैध कामदारलाई सुनौलो अवसर ! – Everest Dainik – News from Nepal
यूएईमा अवैध कामदारलाई सुनौलो अवसर !
युएई, साउन ८ । यूएई सरकारले आफ्नो देशमा अवैध रुपमा बसिरहेका अप्रवासीहरुलाई सुनौलो अवसर दिने भएको छ । अवैधरुपमा युएईमा लुकीछिपी बसेका विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्कन वा वा भिसा लिएर वैधानिक बन्ने तीन महिने अवसर दिने भएको छ ।
आगामी अगष्ट १ तारिखदेखि अक्टुबर ३० भित्र गैरकानूनीरुपमा युएईमा लुकीछिपी बसेको विदेशी नागरिकलाई स्वेदश फर्कन वा वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवसर दिने भएको हो । इमिरेट्स आइडी अथोरिटी विभागका उच्च अधिकारी ब्रिगेडिएर साहिदबाट जुलाई २३ तारिखमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
दुबैका लागि कुनै जरिवाना नलाग्ने पनि अधिकारीले बताएका छन् । भिसा वा पासपोर्टको म्याद सकिएका अवैध कामदारले पाँच सय दिराम तिरेर कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिगत रुपमा भिसा लिएर काम गर्न वा यूएईमै बसोबास गर्न पाउनेछन् । आफ्नो देश फिर्ता हुन चाहेले कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।